Short Pipe | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Neo-Tribes and Traditional Tribes (Theories and Concepts)
Interview: The Occupiers Band →
August 22, 2009 · 8:25 am
A pipe …a puff …
short asafinger …
“If I do not take it
Mae Khwe was the daughter of the Mayor of Sittaung and she was married toaMaung Swe. When King Bodopaya (Bodawphaya) ascended the throne in 1782 C.E., Mae Khwe becameaCourt Poetess.
C.E. means Christian Era.
(from Burmese Classical Poems – Selected and Translated by The Most Rev. Friedrich V. Lustig (Ashin Ananda), Buddhist Archbishop of Latvia.)
4 responses to “Short Pipe”
ဆိုတဲ့နေရာမှာ you က အပေါ်က crude နဲ့ rhythm မိအောင်ယူထားတာ ဖြစ်နေသလိုပဲနော်…။ true ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ။ grammar နည်းတော့ ကျချင်မှကျမယ်…။ လတ်ဗီးယား ဘုန်းတော်ကြီးက မြန်မာလိုတတ်တယ်နော်…။ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…။
မင်းဒင်ပါဗျာ ။ ကြည့်ရတာ ကွန်ပြူတာကို တော်တော် အကျွမ်းတဝင် ရှိပုံရတယ် ။တင်ထားတဲ့ စာတွေ ၊တင်ပုံ တင်ဟန်တွေ သဘောကျမိတယ်ဗျ ။ ကျနော် ရေးချင်လွန်းလို့ ရေးတတ်သလို ရေးချင်တဲ့ အချိန်ရေးနေ တဲ့ စာတွေ တကူးတက လာဖတ်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းမြောက်မိ ကြောင်းပါ ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ ။
ကျနော့်စာတွေ ဖတ်ပြီး “စာတတို“လောက်ရေးမယ်ဆိုတာ ရေးဖြစ်အောင် ရေးစေလိုပါတယ် ။ ကောင်းကွက် ၊ညံ့ကွက် အားလုံး အားမနာတမ်း ရေးစေလိုပါတယ်။
ဒီမြန်မာကဗျာက အဓိပ္ပာယ်ရှိသလောက် ဘာသာပြန်ကြီး ဖတ်လိုက်ရတာ ပေါ့သွားသလိုပဲ… ကိုယ်ကပဲ အင်္ဂလိပ်စာညံ့လို့လားမသိ.. စကားမစပ်.. ကိုသင်ကာ့ဆီ မရောက်တာ ကြာကြာလှပြီ.. ခုမှပဲ ပြန်ရောက်ဖြစ်တော့တယ်…